I-Raw Palmitoylethanolamide (PEA) powder iyi-amide fatty acid engapheli, engaphansi kwesigaba se …… ..
Umthamo: 1287kg / inyanga
I-Raw Palmitoylethanolamide powder (ividiyo ye-544-31-0)
I-Raw Palmitoylethanolamide powder (544-31-0) Siziqu
Igama Product I-Raw Palmitoylethanolamide powder
Igama leKhemikhali I-Raw Palmitoylethanolamide powder;
I-Drug Class Amines, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals
CAS Inombolo 544-31-0
I-molecular Fi-ormula C18H37NO2
I-molecular Weziyisishiyagalombili I-299.499 g / mol
IMisa ye-Monoisotopic 299.50 g / mol
Ukuxuba Pi-oint 93 ku-98 ° C (199 kuya ku-208 ° F; 366 kuya ku-371 K)
Iphuzu lokubilisa 461.5 ° C ku-760 mmHg
Color Kube Mhlophe kuya ku-Off-White Solid
Sukufaneleka I-Chloroform (Ngokuncane), i-Methanol (Ngokuncane)
I-Raw Palmitoylethanolamide powder Aukuphikisana I-Raw Palmitoylethanolamide powder i-CB2 ye-cannabinoid receptor agonist engapheliyo futhi ikhetha i-GPR55 agonist.
I-Raw Palmitoylethanolamide powder (544-31-0) Incazelo
I-Raw Palmitoylethanolamide powder (i-PEA) i-fat amide engapheliyo e-amide, ephuma ekilasini lama-agonists. I-Palmitoylethanolamide (PEA) ikhiqizwa emzimbeni ukulwa nobuhlungu nokuvuvukala. Izilwane eziningi nezitshalo nazo zenza i-PEA. Inani eliphakeme kakhulu lingatholakala ku-lecithin ye-soy, ama-soybe, i-yolk, i-peanuts ne-alfalfa. Le asidi enamafutha ingaqinisa ngokuphepha imithi yakho yemvelo futhi ivikele imizwa emzimbeni wakho wonke. Izinzuzo zalo zikhuthaza ukuhlukumezeka okuningi okunzima ukuphatha.
I-Palmitoylethanolamide ikhonjisiwe ukuthi ibophezela kumamukeli ku-cell-nucleus (i-receptor yenuzi) futhi inemisebenzi ehlukahlukene yemvelo ehlobene nobuhlungu obungapheli nokuvuvukala. Okuqondiwe okuyinhloko kucatshangwa ukuthi yi-peroxisome proliferator-activated receptor alpha (PPAR-α). Kodwa-ke, ukuba khona kwePalmitoylethanolamide (namanye ama-N-acylethanolamines ahlobene nokwakhiwa) kuye kwaziwa ukuthi kuthuthukisa umsebenzi we-anandamide ngalokho okuthiwa "umphumela we-entourage". I-Raw Palmitoylethanolamide powder / i-PEA ikhonjisiwe ukuthi inezakhiwo ezilwa nokuvuvukala, i-anti-nociceptive, i-neuroprotective, ne-anticonvulsant.
Njengengxenye yokwengeza, i-PEA itholakala kuthebulethi, i-capsule, nefomu le-powder. E-Italy naseSpain, i-PEA idayiswa njengokudla kwezinjongo ezikhethekile zokwelapha.
I-Palmitoylethanolamide powder (544-31-0) Indlela Yokusebenza
I-Palmitoylethanolamide ivuselela i-PPAR alpha yokuvuselela amandla, ukushisa nokushisa. Ngokusebenzisa le phrotheni eyinhloko, i-PEA ivimba umsebenzi wezakhi zofuzo ezivuthayo nokukhiqiza izinto eziningi zokuvuvukala.
I-Palmitoylethanolamide inciphisa umsebenzi we-Genetic gel gels ukuthi ihlukumeza i-annamidide engokwemvelo yemvelo. Lokhu kwandisa amazinga okunciphisa i-anandamide emzimbeni wakho, ekusizeni ukulwa nobuhlungu nokukhulisa ukuphumula. Kungase futhi kusebenze i-receptors ye-cannabinoid (CB2 ne-CB1).
I-Palmitoylethanolamide iqukethe i-asidi palmitic esakhiweni sayo. Isiqalo sokwenza i-PEA emzimbeni ngokuqondile yi-asidi fatty egcwele.
Kodwa-ke, ukwanda nje kokudla kwakho i-palmitic acid noma amanye amafutha ekudleni ngeke kuthinte ukukhiqizwa kwePalmitoylethanolamide emzimbeni. Lokhu kungenxa yokuthi umzimba wakho uzosebenzisa i-PEA kuphela lapho udinga ukunxephezela ukuvuvukala noma ubuhlungu, futhi amazinga ayo nawo azohlukahluka usuku lonke. Indlela enhle yokuthola izinzuzo ze-PEA izithasiselo ezijwayelekile, noma okunye ukudla okunothe kwe-PEA.
Sebenzisa wePalmitoylethanolamide powder (544-31-0)
▪ Ukuphathwa kobuhlungu
▪ Imithi elwa nezidakamizwa
Kunconywe i-Palmitoylethanolamide powder (i-544-31-0) Isilinganiso
Ucwaningo oluningi lwezokwelapha lungasiza kepha kukhona namanje okwanele okusho ukuthi i-Palmitoylethanolamide iyongezelela ngokuphephile. Ngisho nesikhathi eside se-PEA supplementation ayixhunywanga nanoma yimiphi imiphumela emibi. I-Palmitoylethanolamide isetshenziselwa ukulinganisa kwe-300 mg kuya ku-1.8 g / ngosuku ezifundweni zemitholampilo.
Kungadingeka okungenani ama-600 mg / ngosuku ukudambisa izinhlungu zemizwa, kanti amanani we-1.2 g / ngosuku asetshenziselwa izinzwa zesifo sikashukela.
▪ I-PEA efinyelela ku-1.8 g / ngosuku isetshenziselwe ukunciphisa ukulimala kwezinzwa zamehlo kubantu abane-glaucoma noma isifo sikashukela.
For Ekulweni nomkhuhlane ovamile, u-1.2 g / ngosuku ubungumthamo ojwayelekile.
Umthamo ophelele ungahlukaniswa kabili phakathi nosuku. Sincoma ukuqala ngomthamo ojwayelekile we-1.2 g / ngosuku uhlukaniswe waba yi-600 mg ekuseni no-600 mg ntambama. Landelela impendulo yakho bese ukwandisa kancane kancane umthamo ngemuva kwenyanga engu-1 uma kudingeka.
Izithako ezenziwe nge-Micronised Palmitoylethanolamide zisetshenziselwa izifundo eziningi ziphakeme kunezinye izinhlobo. I-Micronised Palmitoylethanolamide iyi-powder emihle engcono kakhulu. I-Palmitoylethanolamide ehlangene ne-luteolin nayo isetshenziselwa ukuvivinywa kwemitholampilo futhi iyoba usizo olukhulu empilweni yengqondo.
Izinzuzo I-Palmitoylethanolamide powder (544-31-0)
Kusukela yatholwa ngawo-1950, abacwaningi bahehwa yiPalmitoylethanolamide. Njenge-painkiller eqinile futhi ephephile yemvelo futhi elwa nokuvuvukala, iPalmitoylethanolamide inikeza ithemba kubantu abaningi abaphethwe yizinhlungu ezingapheli neze-neuropathic. Ngaphandle kwalolu sizo, iPalmitoylethanolamide powder inganikela ngezinzuzo ezingaba khona empilweni yakho. Kunezinzuzo ezithile zokubhekiswa:
I-PEA Yehlisa Ubuhlungu Nokuvuvukala
Ithuthukisa Impilo YeBongo Nokuvuselelwa
♦ Ilungele Amehlo Akho
♦ Ingavikela Inhliziyo Yakho
Yehlisa Ukuvuvukala Kwamathumbu
♦ Kunganciphisa Izimpawu Zokucindezeleka.
Yehlisa Izimpawu ze-Multiple Sclerosis
♦ Ingalwela Umkhuhlane Ovamile
Yehlisa Ukukhishwa Kwe-Histamine
Izinzuzo ezintsha zePalmitoylethanolamide ziyaqhubeka nokutholwa, zishiya abanye ososayensi bedidekile. Kuvela ukuthi iPalmitoylethanolamide nayo ingenza kusebenze ama-cannabinoid receptors, ithuthukise imizwa, inciphise ukungezwani komzimba.
Yini amaqiniso kuPalmitoylethanolamide (PEA) enezinzuzo zokunciphisa umzimba?